Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Diplaomasian’ny mpivarotra tanindrazana
Inty sy nday: Diplaomasian’ny mpivarotra tanindrazana
Mbola akon’ilay fandaharana “Fotoam-bita” fanaon’ny filohampirenena isakerinandro ihany ity takelaka iray momba ny “inty sy nday” ity. Raha nifotoranay teto amin’ity Gazetin’ny Nosy ity tamin’ny sabotsy ny toa fironan’ny filohampirenena Rajaonarimampianina any amin’ny vondron-tany “Brics”, tamin’io fandaharana fotoam-bita tamin’ny zoma teo io, dia nisy fanamarihana tsy azo hadinoina koa tamin’ny lahateny nataony tao amin’io fandaharana “fotoam-bita” io ihany. Tsy inona io fa ny filazany hoe “aoka tsy hanimba ny fifandraisantsika amin’ny any ivelany ny fihetsitsika”.
Tsy tokony hadinoina kosa aloha fa nisy ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no nanakiana ny fandehanan-dRajaonarimampianina tany Rosia. Mety ho ireo sokajin’olona manimanina ny tongon’i Ejypta tamin’ny fiarahana tamin’ny tandrefana hatrizay ireny. Tao ny nitsikera ny ataon’ny karana eto nefa dia noraisin’ny filohampirenena Rajaonarimampianina teto ny filohampirenen-dry zareo karana (Indiana) tamin’iny herinandro iny. Misy koa ny manao fankahalana an-jambany ny sinoa tonga eto. Sy ny maro tsy hotanisaina.
Amin’ny lafiny iray aloha dia zon’ny olom-pirenena Malagasy ny mitondra fanakianana sy fitsikerana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin’ny raharaham-pirenena; ka na resaka toekarena iantefan’izany na tontolo sosialy na lafiny politika na sehatry ny diplaomasia… dia anjaran’ny fitondram-panjakana ny manitsy ny diany na manao ny fomba rehetra handresena lahatra ny any ivelany mba handinganana izany fitsikerana sy fanakianana izany.
Endrika iray ibaribarian’ny tsy fahombiazana ara-diplaomasia eo amin’ny fitondram-panjakana iray ny tsy fahafahany akory manazava ny tena zava-misy eto raha toa ka ny lafiny fampandrosoana an’i Madagasikara no tena tanjona.
Mety ho ny tsy fahombiazan’ny mpitondra fanjakana mampanjaka ny fandriampahalemana ange no isan’ny mampihemotra ny firenena hafa tsy hifandray amin’i Madagasikara e!
Na izany na tsy izany, saro-pady tokoa ity resaka diplaomasia ity ka ilàna mahavita mifehy azy io. Alohan’ny filàna olona mahafehy azy anefa dia takian’ny tombontsoan’ny vahoaka ao amin’ny firenena iray toa an’i Madagasikara ny fananan’ny mpitondra sori-dalana sy tsangan-kevitra marim-pototra nefa matotra amin’io fifandraisana diplaomatika io. Tsy izorana anjambany akory izany “diplaomasia ho amin’ny fampandrosoana” izany fa misy tarigetra sy foto-kevitra tokony hibaiko azy.
Mety hihazakazaka ho avy hifandray ara-diplaomatika amintsika ange ny firenena rehetra manerana an’izao tontolo izao e! Mety hanao tsy omby aloha mihitsy ireo firenena efa mandroso sy ny efa misandratra amin’izany, ary raha eken’ny mpitondra eto dia ho azo antoka koa ny ho famirapiratan’ny firenena Malagasy, ny firoboroboan’ny fampandrosana ara-toekarena… saingy ho tompony mangataka ny atiny ihany ilay Malagasy, ho vahiny eto amin’ny taniny izy. Ny hisitraka ny vokatsoa rehetra avy amin’izany firoboroboana izany dia ny vahiny. Ny hanjaka sy hitavana amin’ny harem-pirenena eto dia ny vahiny. Mety ho kindriandriana tokoa ity Madagasikara ity, noho ny politika ara-diplaomatika ataon’ny mpitondra, fa ny vahiny avokoa no hisitraka izany fa ny Malagasy dia ho lasa eny antampon’Ihorombe, amin’ny tany ngazana, na eny Isalo sy ny hafa.
Noho izany, hatreto aloha, nandritra izay 57 taona lasa izay, dia tsy nisy diplaomasia niteraka voka-tsoa ho an’ny vahoaka teto fa nanjakan’ny diplaomasian’ny fivarotan-tanindrazana.